Qodaalonline.blogspot.com: Turkey, Qadiyadii J. Somaliland Way Ku-habawday oo ay ku Hafatay....
Maqalkaa warkaas ka dib, xukuumada J.Somaliland iyada oo muujinaysa cadho ay ka qaaday hadalka Safiirka, waxay markiiba makarafoonka u dhiibtay oo jawaabay af-hayeenka W|A|dibada ee J.Somaliland (Axmed Y. Cilmi) oo yidhi; "waraaq ayaan u diraynaa dalka Turkiga oo aanu kaga dalbanaynaa inay war-cad ka bixiyaan waxa ka jira hadalka safiirkooda, hadii ay ka soo jawaabi waayaan-na calaamatu-su'aal wayn ayaa saaran dhexdhexaadnimada Turkiga ee ku wajahan wada-hadalka J.Somaliland iyo Somalia". Yaab iyo yaabkiis!! Waar waa ayo cida loo dhigayaa ruwaayadan yar ee bilaa-macnaha ahi^).
Mar iyo laba-toona ma aha ee waa Kun goor iyo ka-badan, inta jeer ee uu dalka Turkigu si toos ah iyo si dadban-ba ugu sheegay siyaasiyiinta reer Somaliland in uu danaynayo Soomaaliya, Qadiyadda Somaliland-na aanu lexe-jeclo badan ka qabin. Hadaba, hadii ay madaxda J.Somaliland daacd u yihiin dalkooda iyo dadkooda maxaa ka hor-jooga in ay laba midkood yeelaan;
1. Joojiyaan wada-hadalka Turkigu wado ee u dhaxeeya J. Somaliland iyo Somalia.
2. Ama dadka runta u sheegaan oo yidhaahdaan, xal kale ma hayno oo dan baa ina baday Turkey iyo qorshahiisa qalafsan ee uu wado ee Allah ha inoo shifeeyo-e aan iska liqno oo iimaansano! Oo macnaheedu yahay aynu riciyad u noqon Xamar mar kale (Allah kama dhigo).
Labadaa qodob waxaan ahaynin waa iska uun .......
"Ha jirto J.Somaliland oo Ha Joogto Walgeed."
Cali Cumar Xasan (Self styled politician)
Posted by WYL-News at 12:57 PM